Iziphumo zeMbasa ye-A' Design ziyabhengezwa
Abaphumelele iiMbasa ze-A' Design bayabhengezwa
Home > Press > Results > Award-winning designs
Imbasa yezizwe ngezizwe ye-A' Design ibhengeze olonayilo lubalaseleyo lonyaka kuzo zonke iinkalo zoyilo.
Imbasa ye-A' Design (http://www.designaward.com), amabhaso oyilo lwamazwe ngamazwe alawula iWorld Design Rankings, ibhengeze iziphumo zokhuphiswano loyilo lwamva nje.
Imbasa ye-A' Design ibhengeze amawaka oyilo olulungileyo, iimveliso eziyilwe kakuhle, kunye neeprojekthi ezikhuthazayo njengabaphumeleleyo. Uyilo olusanda kubhengezwa oluphumelele ibhaso lupapashwa kwi-intanethi kuluhlu lwabaphumeleleyo lweMbasa ye-A' Design.
Amangenelo eMbasa ye-A' Design avavanywa ngononophelo ligqiza elikhulu labagwebi elinempembelelo kumazwe ngamazwe elihlanganise izifundiswa ezibalaseleyo, iintatheli ezinempembelelo, iingcali zoyilo ezisele zimiselwe kunye noosomashishini abanamava abavela kwihlabathi liphela.
I-A' Design Award jury inike ingqwalasela enkulu kwinkcazo kunye neenkcukacha zeprojekthi nganye. Umdla kwibhaso loyilo ubukwilizwe jikelele, kukho amagama atyunjiweyo kuwo onke amacandelo aphambili amashishini, kunye namangenelo asuka kwinani elibalulekileyo lamazwe.
Abantu abathanda uyilo olulungileyo kunye neentatheli kwihlabathi liphela bamenywe ngokufudumeleyo ukuba bafumane impembelelo yoyilo entsha kwaye bafumanise iindlela zamva nje kubugcisa, uyilo, uyilo kunye netekhnoloji ngokundwendwela umboniso ophumelele imbasa ye-A' Design. Iintatheli kunye nabathandi boyilo nabo bayakonwabela udliwano-ndlebe olunabayili abaphumelele amabhaso.
Iziphumo zoKhuphiswano loYilo lwe-A' zibhengezwa minyaka le embindini ka-Epreli, kuqala ukuya kwabaphumelele amawonga. Isibhengezo seziphumo zoluntu siza kamva phakathi kuMeyi.
Iimveliso ezigqwesileyo, iiprojekthi kunye neenkonzo kwihlabathi liphela ezibonisa uyilo olugqwesileyo, itekhnoloji kunye nobuchule bayongwa ngeMbasa ye-A' Design. Imbasa ye-A' Design ibonakalisa ukugqwesa kuyilo nakwinguqulelo.
Kukho amanqanaba amahlanu ahlukeneyo omahluko woyilo lwamabhaso:
IPlatinam: Iwonga leMbasa yePlatinam A' linikezelwe kuyilo oluhle kakhulu olukumgangatho wehlabathi olubonisa iimpawu zoyilo ezigqwesileyo ngokugqithisileyo.
IGolide: Iwonga leMbasa yeGolide yoYilo inikezelwa kuyilo olukumgangatho wehlabathi olulunge kakhulu olubonisa iimpawu zoyilo ezigqwesileyo ngokugqithisileyo.
ISilivere: Iwonga leSilver A' Design Award linikezelwa kuyilo olukumgangatho wehlabathi olugqwesileyo olubonisa ukugqwesa okugqwesileyo kuyilo.
Ubhedu: Iwonga leBronzi A' Design Award linikezelwa kuyilo oluhle kakhulu olubonisa ukugqwesa kuyilo.
Intsimbi: Isihloko seMbasa ye-Iron A' Design inikwa kuyilo oluhle olubonisa ukugqwesa kuyilo.
Abayili, amagcisa, abayili bezakhiwo, izitudiyo zokuyila, ii-ofisi zezokwakha, ii-arhente zokuyila, iimpawu, iinkampani kunye namaziko aphuma kuwo onke amazwe minyaka le abizwa minyaka le ukuba athathe inxaxheba kumawonga ngokutyumba imisebenzi yabo egqwesileyo, iiprojekthi kunye neemveliso eziza kujongwa.
IiMbasa ze-A' Design zinikezelwa kuluhlu olubanzi kakhulu lwamacandelo okhuphiswano, aqulathe ngakumbi amacandelwana amaninzi.
Iindidi zeMbasa ye-A' yoYilo zinokudityaniswa kwiiseti ezinkulu ezintlanu:
Imbasa yoYilo oluLungileyo lweNdawo: Inqanaba lembasa loyilo loyilo libona uyilo olulungileyo kuyilo loyilo, uyilo lwangaphakathi, uyilo lwedolophu kunye noyilo lokuma komhlaba.
Imbasa yoYilo oluLungileyo kuShishino: Udidi lwembasa loyilo lwemizi-mveliso lunakana uyilo olulungileyo kuyilo lwemveliso, uyilo lwefanitshala, uyilo lokukhanyisa, uyilo lwesixhobo sombane, uyilo lwesithuthi, uyilo lokupakisha kunye noyilo loomatshini.
Imbasa yoYilo loNxibelelwano oluLungileyo: Inqanaba loyilo lonxibelelwano libona uyilo olulungileyo kuyilo lwemizobo, uyilo lonxibelelwano, uyilo lomdlalo, ubugcisa bedijithali, umzobo, ividiyo, intengiso kunye noyilo lwentengiso.
Imbasa yoYilo lweFashoni oluLungileyo: Inqanaba lembasa loyilo lwefashoni liqaphela uyilo olulungileyo kuyilo lobucwebe, uyilo lwempahla yefashoni, impahla, izihlangu kunye noyilo lwempahla.
Imbasa yoYilo lweNkqubo eLungileyo: Udidi lwembasa loyilo lweNkqubo lunakana uyilo olulungileyo kuyilo lwenkonzo, isicwangciso soyilo, uyilo lobuchule, uyilo lwemodeli yeshishini, umgangatho kunye nokusungula izinto ezintsha.
Abaphumelele amabhaso abafanelekileyo bayamenywa ukuba baye kumsitho oqaqambileyo wegala ebusuku kunye nomsitho wamawonga e-Italiya, apho baya kubizelwa eqongeni ukubhiyozela impumelelo yabo kunye nokuqokelela iindebe zabo, izatifikethi zamabhaso kunye neencwadi zonyaka.
Uyilo oluphumelele imbasa luboniswa ngakumbi kumboniso woyilo lwamazwe ngamazwe e-Itali. Abaphumeleleyo abafanelekileyo kwiMbasa ye-A' Design banikwa ibhaso elibawelayo eliyi-A' Design.
Ibhaso le-A' Design libandakanya uluhlu lobudlelwane boluntu, upapasho kunye neenkonzo zelayisensi ukunceda ukudala uxabiso lwehlabathi kunye nokwazisa ngoyilo oluphumelele ibhaso olulungileyo.
Ibhaso le-A' Design libandakanya ukunikwa ilayisensi yeLogo yoMphumeleleyo weA' Design kubawongwa abafanelekileyo ukubanceda bahlule iimveliso zabo zoyilo ezilungileyo, iiprojekthi kunye neenkonzo ezivela kwezinye iimveliso, iiprojekthi kunye neenkonzo kwimarike.
Ibhaso le-A' Design libandakanya ubudlelwane bamazwe ngamazwe kunye neelwimi ezininzi zoluntu, intengiso kunye neenkonzo zokukhuthaza ukunceda uyilo oluphumelele ibhaso ukuba luvezwe kwihlabathi liphela, ukuthengiswa kunye nokubekwa kwemithombo yeendaba.
Imbasa ye-A' Design sisiganeko sonyaka soyilo. Amangenelo kuhlelo olulandelayo lweMbasa ye-A' Design kunye noKhuphiswano sele luvuliwe. IMbasa ye-A' Design yamkela amangenelo avela kuwo onke amazwe kuwo onke amashishini. Amaqela anomdla amkelekile ukuba achonge uyilo olululo lokuqwalaselwa kwamabhaso kwiwebhusayithi yeA' Design Award.
Uluhlu lwamalungu akhoyo ngoku, imilinganiselo yovavanyo loyilo, amaxesha abekiweyo oyilo lokhuphiswano, iifomu zokungenela ukhuphiswano loyilo kunye nezikhokelo zokungeniswa koyilo lwamabhaso ziyafumaneka kwiwebhusayithi yeA' Design Award.
Malunga ne-A' Design Awards
Imbasa ye-A' Design inenjongo yobubele bothando ukuqhubela phambili uluntu ngoyilo oluhle. Imbasa ye-A' Design ijolise ekudaleni ukwazisa ngezenzo zoyilo ezilungileyo kunye nemigaqo kwihlabathi liphela, kunye nokuvuselela kunye nokuvuza ubuchule bokuyila, imibono yokuqala kunye nokuveliswa kwengqiqo kuwo onke amacandelo oshishino.
IMbasa ye-A' Design inenjongo yokutyhalela phambili imida yenzululwazi, uyilo kunye neteknoloji ngokwakha inkuthazo eyomeleleyo kubadali, abaqambi bezinto ezintsha kunye neempawu kwihlabathi jikelele ukuba beze neemveliso ezigqwesileyo kunye neeprojekthi ezinceda uluntu.
I-A' Design Award ijonge phambili ekukhuthazeni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neeprojekthi ezibonelela ngexabiso elongezelelweyo, ukusetyenziswa okwandisiweyo, ukusebenza okutsha, ukuphuculwa kobuhle, ukusebenza kakuhle okubalaseleyo, ukuzinza okungcono kunye nokusebenza okuphezulu.
IMbasa ye-A' Design ijolise ekubeni sisixhobo esinamandla esikhokelela ekudaleni ikamva elingcono elinoyilo olulungileyo, kwaye yiyo loo nto iBhaso le-A' Design liqulethe inani elikhulu leenkonzo zokukhuthaza uyilo oluwongwayo olulungileyo.
Bona abaphumeleleyo i-A' Design Awards
Good design deserves great recognition.
A' Design Award & Competition.